Vibratory wokucwebezelisa Machine Factory - China Vibratory wokucwebezelisa Machine Manufacturers, abahlinzeki
Umshini wokuqeda isidlidlizi onekhava yamahhala yomsindo
Amasistimu wokuqedwa kwe-vibratory tumble akhiqiza isenzo sokusika ngokunyakazisa isitsha sokucubungula (ubhavu wokuqeda) ngejubane elikhulu,
okwenza imithombo yezindaba ewayo nezingxenye zayo zikhuhlane. Lesi senzo sokuhlikihla singena ngqo ezingxenyeni ukususa ama-burrs.
Shaft enezinsimbi ezijikelezayo ezigxunyekwe kubhavu ikhiqiza isenzo sokunyakazisa.
Imishini yokudlidliza eguquguqukayo nezinhlelo zokuqeda ziveza isenzo sokusika esisebenza kahle kakhulu.
Basusa okokusebenza emaphaketheni nasezikhaleni nangaphakathi kwamabhali, angenakwenziwa kusigaxa somgqomo,
ngakho-ke zingasetshenziselwa izingxenye ezibucayi noma eziyinkimbinkimbi. Ngejubane eliphezulu nohlangothi olufushane,
zingakwazi futhi ukusebenzisa izingxenye ezinkulu ezinkulu ngaphandle kokulimala. Iziphiko ezinkulu zamaphiko nemikhawulo yokwehla kuvame ukuqhutshwa kulezi zinhlelo.
Izinhlelo zokuqedela isidlidlizi nazo ziboleka ukuthi zisebenze kalula.
Zingazenzekela ngokuphelele ekusebenzeni kokugeleza noma zisetshenziswe njengokusebenza okuyisisekelo kweqoqo.
Isenzo esokujikeleza okuncane ngejubane elikhulu futhi ngaleyo ndlela sinamandla amakhulu, kepha kubangela ukucindezeleka okuncane ezingxenyeni
Izinhlobo ezahlukahlukene nobuchwepheshe
Imodeli Amandla Amandla Amandla
Isivinini sezimoto PU Isisindo (kg) Usayizi (L×W×H) mm
(r / iminithi) (mm)
I-HST-300 (BC) 300L 3.7kw 1450 20 400 1480 × 1350 × 1100
I-HST-400 (BC) 400L 3.7kw 1450 20 600 1480 × 1350 × 1100
I-HST-600 (BC) 600L 5.5-7.5KW 1450 20 1500 Ngo-1950 × 1750 × 1450
Ukwelashwa kwe-Holdwin Surface okudlidliza imishini yokugoqa isitsha ngekhava engenamsindo
Isomisi se-Industrial centrifugal • Isomisi somoya esishisayo se-centrifugal
I-hot air centrifugal dryer isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi izingxenye azinawo amabala nokugqwala kwamahhala, kulandela ukuqhutshwa kokumanzi okumanzi,
okubaluleke kakhulu ukuthi izingxenye zipendwe njengokusebenza kokugcina, ezilungele kakhulu ukucubungula izingxenye ezincane.
Omiswe ngomoya oshisayo nange-cavnum
Ubhasikidi wangaphakathi we-centrifugal owenziwe ngensimbi engagqwali enezimbobo, amanzi asuswe ezindaweni zezingxenye ngamandla we-centrifugal okwandisa ukusebenza kahle.
Umoya oshisayo ufushanisa isikhathi sokomisa futhi uholele umswakama futhi uvikele izingxenye ekugqonyeni nasekugqonyeni.
Ukulawulwa kwejubane kwe-inverter ngezinketho eziningi zenqubo.
Vikela ukuthi idivayisi ivala amandla ngokuzenzakalela lapho kucubungulwa kuqedile noma lapho ikhava ivulwa.
Umshini wokususa uwoyela we-HOLDWIN Industrial Centrifugal Dehydrator 70L
I-Industrial Centrifugal dewaterer
isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi izingxenye azinawo amabala nokugqwala azomile, kulandela ukucutshungulwa okumanzi kokuqedwa, okubaluleke kakhulu ukuthi izingxenye zipendwe njengomsebenzi wokugcina
efaneleke kakhulu ukucubungula izingxenye ezincane.
Omiswe ngomoya oshisayo nange-cavnum.Ibhasikidi elingaphakathi le-centrifugal elenziwe ngensimbi engagqwali enezimbobo,
amanzi asuswe ezindaweni zezingxenye ngamandla we-centrifugal okwandisa ukusebenza kahle.
Okuzenzakalelayo ukugeleza polisher
I-polisher ingasetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene kuzinsimbi, izinto ezingezona zensimbi ezidonsa izingxenye zezingxenye zokugaya
izingxenye zemishini, ukusakaza nokwakha, h
udle ukwelashwa nezinye izingxenye, ukuqhuzuka, ukunqunywa, ukupholishwa nezinye izinqubo.
Ikakhulukazi ukwakheka okuyinkimbinkimbi, ama-burrs amakhulu e-oxide anezikhumba ezinkulu futhi izingxenye ezincane zinikeza okokusebenza okuhamba phambili.
Okuzenzakalelayo Rotary wokucwebezelisa umshini nge isihlukanisi
1. I-Vortex polisher isebenzisa umgomo wokuqala wokugeleza kwe-vortex, indawo yokusebenza kanye netshe lokugaya ukufezekisa ukungqubuzana okwanele, ukusebenza kahle kokukhanya, kuthuthukisa ukusebenza kahle izikhathi eziyi-15-30.
2.Vortex polisher turntable motor for the motor, kungadingeka ukhethe ukudayela ngesivinini; i-timer enesibonisi sedijithali, okulula ukusisebenzisa, ingahlala ibona isimo sokwenza umsebenzi.
3. I-Vortex polisher turntable tank elungisiwe futhi embozwe irabha le-polyurethane, negebe phakathi kwe-turntable eguquguqukayo, gqoka ukumelana nempilo ende yokusebenza.
Okuzenzakalelayo Steel Nail ngokuyikho Barral wokucwebezelisa umshini deburring
Usayizi wamandla ayo ungahlukaniswa ngamalitha ayi-150, amalitha angama-300 kanye namalitha angama-600 wokucaciswa okuningana kwensimbi engagqwali, insimbi, ithusi, i-zinc, i-aluminium,
i-magnesium alloy nezinye izinto ngokufaka isitampu, ukusakaza, ukusakaza, ukwakha, izintambo, i-ceramics, i-jade, i-coral, izinhlaka zokwenziwa, amapulasitiki,
izitsha zobumba nezinye izinto ezibonakalayo zipholisha phezulu, zibhoboza, zisuse ama-burr, ukugqwala, ukugaya okunzima, ukugaya ngokunemba, ukupholisha isicwebezelisi, ifilimu elimnyama, ukugaya okumnyama nokuhle, ukupholisha i-chamfering
Okuzenzakalelayo rotary wokucwebezelisa umshini
Efanelekayo umsebenzi omncane isiqeshana ephezulu ukucacisa ukugaya nokupholisha imisebenzi, ungasusa ngokushesha i-chamfer,
ukudlala i-burr ukugaya nokupholisha, nakho kufanelekile ukususwa kwe-silica gel flash.
1, Kuqhutshwa izinjini enezingqimba
2, uhlelo lokuqinisa ukukhishwa luvumela ukuguqulwa kwesikrini esisheshayo.
Isikrini se-3, esivulekile singenziwa ngensimbi engagqwali ehlala isikhathi eside futhi engaqotheki noma ifakwe i-PU ukuqeda ukuhuzuka.
imishini ye-ultrasonic vibro deburring wokupholisha
Uhlelo lokusebenza lokhiye wokudlidliza lusebenza izingxenye ezenziwa ngezinsimbi, izinsimbi ezingezona ezensimbi nezingezona izinsimbi. Ngaphandle kwalokho,
onjiniyela basebenzisa inqubo yokususa i-burr nokugqwala, izingxenye zensimbi ezinqenqemeni ukugoqa kanye nesibuko ukupholisha. Ngaphezu kwalokho,
le nqubo ithandwa ikakhulukazi wokucwebezelisa izingxenye nge eziyinkimbinkimbi ebusweni geometry futhi ebusweni ngilugweda.
Ngemuva kokucubungula, akukho monakalo ezingxenyeni ezingaphezulu futhi akukho kuthinteka kubukhulu bezingxenye.
Futhi, ukuqina kwendawo kwezingxenye kungathuthukisa i-1-2 degree. Umshini wokudlidliza ulungele ukuqeda izingxenye ezincane zosayizi ophakathi ngobuningi be-batch enkulu.
√ Ukuthambekela okuncane kokucubungula isiteshi.
√ Isango lokwehlukanisa elinokufakwa ngesandla noma inketho yokuhlukaniswa kwe-flap esebenzayo.
√ Ukusebenza okulula nezindleko ezincishisiwe zabasebenzi
√ Izisindo zokungalingani ezingaguquguquki zivumela ukuqina okuhlukile kokuqedela.
√ Ulwelwesi lokugqoka olunemithi eyenziwe nge-PU esezingeni eliphakeme.
√ Imidiya yehlisa ipulaki ngokukhipha okungcolile okuhlanganisiwe.
Stone Vibratory wokucwebezelisa umshini
Uhlobo olude lwe-Stone Vibratory lokuqedela umshini Isicelo: I-Radiusing, Deburring, Derusting, Surface smoothing, Degreasing, Cleaning before plating or chemistry, Finishing, polishing. Ama-technicalparameters: Model Capacity (L) Lining thickness (mm) Isisindo esingenalutho (kg) Motor (kW) Tub size (mm) L × W dimensions External (mm) L × W × H HST240 240 20 450 2 × 1.1 690 × 672 1880 × 880 × 920 HST500 500 22 1200 2 × 2.2 1310 × 672 2870 × 880 × 920 HST750 750 22 1600 2 × 5.0 2 ...
Magnetic wokucwebezelisa umshini izingxenye ezincane zensimbi
Umshini wokupholisa iMagnetic - ukulungisa izingxenye ezincane zomphumela wokupholisha ngokunembile kuyamangalisa.
Isimiso somshini wokupholisha kazibuthe: Umshini wokupholisha iMagnetic uyithuluzi elisha.
Ukusetshenziswa kwezinguquko zamandla amakhulu kagesi aphezulu kakhulu, ukuqhutshwa kwemidiya encane yokugaya (ukuma kwensimbi engagqwali).
okuholela ekugelezeni kwejubane elikhulu, ujike, unyakazise nokunye ukunyakaza.
phezu komsebenzi wokusebenza bore.any engalingani ebusweni ukungqubuzana ukufinyelela wokucwebezelisa .cleaning.removal of ngokunemba ukugaya burrs neminye imiphumela